देश मा किरा - grozdevoy Listoverka
Grozdevoy listoverka Listoverok परिवार पर्छ, यो अङ्गुरको एक किरा हो। 12-मिमी पुतली पखेटा, हरियो संग एकान्तरण नेतृत्व र yellowish रंग, एक संगमरमर ढाँचा छ। अन्डा एक yellowish रङ्ग, पारदर्शी, लम्बी आकार छ। लाभ्रेकीरालाई कहिलेकाहीं टाउको मा सुनको ढाल संग हरियो जैतून, हरियो अक्सर छन्। Polusantimetrovaya कमला किरा शरीर को जैतून खैरो रंग छ। नियम, grozdevoy listoverka तीन पुस्ताका मार्फत जाँदै।
जाडो कीराहरूको pupae ट्रंक को आधार मा बिरूवा को छाल वा माटो मा चर्किएको खर्च। वसन्त मा किरा को वर्ष को हावा तापमान 14 डिग्री चिन्ह सुरु, जो को अवधि बारेमा एक महिना हुँदा। महिला कीराहरूको को जीवन को अवधि अन्डा को खुला सयौं बिछाउने पूरा गर्न सक्षम listoverka जो समयमा लगभग4दिन, छ। अण्डा को बारे मा 10 दिन बाहिर बिछाउने पछि लाभ्रेकीरालाई। लाभ्रेकीरालाई पहिलो पुस्ता अर्थ चयन फूल आपूर्ति, युवा ovary र बोट को तन्तु। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका लाभ्रेकीरालाई आफ्नो वेब शक्ति जामुन Rot सुरु भएको बिरुवाहरु लपेटन, वर्षाको मौसममा भन्ने फलतः को प्रक्रिया मा, जामुन खान थालेका छन्। यसरी listoverka क्रप को आधा मार्न सक्षम grozdevoy।
सबैभन्दा यस्तो Riesling वा Biruintsa रूपमा बाक्लो समूहहरु, संग listoverki अंगूर प्रजातिहरू आक्रमण गर्न susceptible। यो अङ्गुरको मात्र किरा छैन।
किरा विरुद्ध लड्न यस्तो व्यायाम जस्तै sumitsidin, Sevigny tsidial, phosalone, tsimbush, tokution, ekamet, flufenoxuron, parathion रूपमा दाखबारीको छिडकाव कीटनाशक मद्दत गर्छ। fungicides यी लागूपदार्थ मिश्रण र फंगल परजीवी विरुद्ध एक साथ प्रयोग गर्न सम्भव। सामान्यतया यस्तो उपचारको लागि आवश्यकता मात्र किरा लाभ्रेकीरालाई दोस्रो पुस्तालाई आवश्यक छ। बाली उपचार अघि बारे एक महिना बन्द गर्नुपर्छ। सम्भव listoverkoy grozdevoy विरुद्ध लड्न चारा जाल को विधि प्रयोग गर्न। यो प्लास्टिक बोतल रक्सी भरिएको (अंगूर pomace देखि) झुन्डिएको मा हुन्छन्। एक पासोमा moths संख्या मुख्यतया चिस्यान असर गर्छ। तसर्थ, मौसम सुक्खा हुँदा चिस्यान वृद्धि फँसाने र यो किरा लागि आवश्यकता बढ्छ जब। लडाई listoverkoy अर्को उपाय प्रकाश जाल छन्। तथापि, यस्तो विधि वास्तवमा, बाहिर छ मुख्यतया पुरुषहरु पक्रने अन्डा-बिछाउने को पाठ्यक्रम निर्धारण भएन। यी किरा को छुटकारा रही एक राम्रो तरिका biologics प्रयोग गरेर उत्पादन स्प्रे छ। सबैभन्दा "Batsilus Turindzhensis" भनिने दबाइ को प्रयोग यो मामला मा प्रभावकारी।
Leaved पहाडी: खेती र हेरविचार को नियम
टमाटर बिरुवा fertilizing
किन लन घाँस? कसरी सही lawns रोपेर गर्न?
कछुवा लागि Terrarium
बोतल के कोर्न सकिदैन मात्र एउटा सानो अंश
Masha Troekurova: वर्ण को कैरेक्टराइजेशन। Masha र व्लादिमीर Dubrovsky Troyekurova को प्रेम कथा
गति आईफोन काम कसरी गर्ने? "सामग्री र सेटिङहरू iPhone मेटाउने" - यो के हो?
आँखा Slanting, विशेष गरी मेकअप
तपाईंको गर्मी विस्तार, वा चेरी जाम कसरी खाना पकाउनु
AdWords गुगल: सेट सामग्री
ट्युनिङ "टोयोटा मर्कूस 2", प्राविधिक विनिर्देशों, समीक्षा र मूल्य